Maitiro ekusvina Apple Music zvizere | IPhone nhau
Maitiro ekusvina Apple Music kune yakazara
Apple Music yakagara nesu kweinopfuura mwedzi uye isu tatoiyedza zvakakwana kuti tizive mashandiro acho. Muchikamu chino tichaedza kutsanangura maitiro ekuita zvinhu zvepamoyo, kubva pakutanga kutanga kunakidzwa nenguva yekuyedza kudhawunirodha mumhanzi kuti uuteerere isingaenderani. Zvinoratidzika kunge zvine mutsindo kwandiri, asi ndinoziva kuti hazvisi zvevose uye ndosaka tafunga kugadzira gwaro iri.
1 Maitiro ekunakidzwa nenguva yemahara yekuyedza
2 Maitiro ekutsvaga mimhanzi zvinoenderana nezvatinoda
3 Kubatana kunoshanda sei
4 Nzira yekugadzira playlists
5 Maitiro ekugovana Apple Music playlist
6 Maitiro ekurodha pasi mimhanzi yekutamba isinei
Maitiro ekunakidzwa nenguva yemahara yekuyedza
Kekutanga isu kumhanyisa iyo Music application mushure mekudzoreredza, isu tichaona sarudzo yekunyorera kuApple Music. Kunyorera isu tinongofanirwa kubaya pabhatani bhatani rinoti «3-mwedzi yemahara kuyedza nguva»Uye, pane inotevera skrini, sarudza yedu hurongwaKana isu tichida kuti iye munhu ave € 9,99 / mwedzi kana yemhuri imwe ye € 14,99 / mwedzi, sezvaungaona mumifananidzo (iwo maviri akatorwa eIpad, usavhiringidzike). Isu tinosimbisa "kutenga" uye tichava nayo. Muhwindo rinobuda, rinotiudza kuti tichabhadhariswa mari yatasarudza, asi ndipo painenge iri nguva yekupera kwedu.
Kana iwe watanga kushandisa chishandiso cheMumhanzi usina kunyorera, inokurumidza uye yakapusa sarudzo yekuti iwe uoneke ndeye tamba pamwoyo webhasi. Ndicho chikamu che "For you" uye chinongowanikwa chete nekunyorera, saka sarudzo yekunyorera ichaonekwa kana uchiedza kuwana chikamu icho.
Iwe unofanirwa kufunga kuti ivo vachatanga kutibhadharisa isu sevhisi otomatiki kana nguva yedu yekuyedza yapera. Kana isu tisingade kuti ivandudzwe otomatiki, iwe unongofanirwa kuteedzera yedu dzidziso Deactivate iyo otomatiki kuvandudzwa kweApple Music uye usawane kutya.
Maitiro ekutsvaga mimhanzi zvinoenderana nezvatinoda
Chimwe chezvinhu zvakanakisa zveApple Music chikamu che "For you". Iyo tebhu mune mapoka anogona kutifarira achaonekwa uye, muchokwadi, akanyatsojeka, kunyangwe chiri chokwadiwo kuti mamwe mapoka kana maartist akakodzera kuita majee kutsvedza mukati maro, asi hei. Ivo vashoma. Kuti «Zvewe» kuti utaure maartist kwatiri, isu tinofanirwa kuupa ruzivo rwakawanda sekugona kwedu. Kutanga isu tinofanirwa kusarudza zvitaera zvemimhanzi zvatinoda uye, kubva kune maartist anotipa zano, sarudza iwo atinoda zvakanyanya. Kune izvi tichaita zvinotevera:
Takatamba mu musoro icon.
Takatamba pa Sarudza maartist ako.
Isu tinosarudza masitaera atinoda nekutamba mairi Zvadaro.
Pakati pevanyori vanotipa zano, tinosarudza vatinoda uye vatambe mairi kubvuma.
Iyo bubble system ine yakapusa mashandiro, asi zvinodikanwa kuti uzive. Tine sarudzo nhatu:
Kana tikabata kamwe chete pabubble, tinozoimaka sezvatinoda. Tichaona kuti inokura zvishoma.
Kana isu tikapeta kaviri pane bubble, tinozoimaka seyatinofarira. Inotowedzera kukura.
Kana akatipa chimwe chinhu chatisingade, tinobata demo ndokubata kuti ribviswe. Tichaona kuti kuverenga kunoonekwa.
Zvakare, sekutaura kwandamboita, tinofanirwa kukupa rumwe ruzivo. Kuti tiite izvi isu tichafanirwa kutamba pamwoyo inoonekwa padyo nenziyo dzatinofarira, maartist, marekodhi, nezvimwe. Kana tikasaona moyo, sezvinoitika mumadhisiki, tinofanirwa kubata mapoinzi matatu kuitira kuti tigoratidzwa nzira, pakati pazvo tichakwanisa kumaka disc sezvatinoda. Kuti tione wekupedzisira skrini yeanotevera matatu, isu tinofanirwa kutsvedza iyo mini-player kumusoro.
Kubatana kunoshanda sei
Zano rakakura randinonyatsoda, asi panguva imwechete ndinotya kuti harishande uye ndinofunga rinogona kuvandudzwa, ndiConnect. Tiri mumavhiki ayo ekutanga ehupenyu uye ndinotenda uye ndinovimba kuti vachawedzera maficha nyowani mune ramangwana. Semuenzaniso, kuzivisa kana kuzivisa kana mumwe wevanyori vari muraibhurari yedu aburitsa basa nyowani, chimwe chinhu chandinozoziva izvozvi nekushandisa kwechitatu-bato.
Zvisinei, parizvino Unganidzo ndeye Facebook kana Twitter yevaartist. Vanyori vanogona kutumira mavhidhiyo, nziyo, mapikicha, uye chero chinhu chavanogona kufunga nezvazvo. Kuti utange kuishandisa, unofanirwa kuve neProfile profile. Kuti tiite izvi, isu tinongofanirwa kuenda kuchiratidzo chemusoro (unogona kuchiona muchikamu chekutsvaga mimhanzi) uye kugadzira nhoroondo. Kana iyo nhoroondo yagadzirwa, tinogona kutevera maartist uye, muKubatanidza tebhu, ona zvese zvinyorwa zvavo, senge paTwitter.
Kana iye muenzi aine chimiro chinoshanda muConnect, tinogona kutsvaga, kupinda peji reartist uye toona zvinyorwa zvake kubva papeji rake, asi izvi hazvizove zvakakosha kana tiri kumutevera nekuti tichamuona pane yedu «madziro», kutaura, sekunge paFacebook kana paTwitter. Tinogona kudyidzana nezvirimo zvinowedzerwa nevanyori, asi zvishoma. Isu tinogona parizvino kuda, kutaura pamusoro, uye kugovana zvako zvinyorwa
Nzira yekugadzira playlists
Kugadzira playlist iri nyore kwazvo, asi inogona kutariswa kana ukasatarisa zvakanyanya sezvo chinyorwa chidiki. Kugadzira runyorwa isu tichafanirwa kuita zvinotevera:
Isu tinobata pane iyo tebhu Mumhanzi wangu. Kana isu tiri muraibhurari yedu, isu tinoshambira kuruboshwe kuti tione zvinyorwa zvedu.
Takatamba pa Nyowani.
Le tinoisa zita.
Le tinowedzera mufananidzo (kusarudza). Sezvauri kuona, rondedzero ichatora iwo mavara emufananidzo iwo atawedzera.
Tinowedzera nziyo kubva kuraibhurari yedu.
Takatamba pa OK.
Kana tikawedzera nziyo dzatisina muraibhurari yedu, dzinozowedzerwa kwatiri. Kana tikabvisa kubva kuraibhurari yedu, ivo vachatibvisa kubva pane yedu runyorwa zvakare, izvo zvandisingade. Zvinonzi hapana chinoitika.
Maitiro ekugovana Apple Music playlist
Kana iwe uchida, iwe unogona kugovera zvinyorwa zvako zveavo vaunofambidzana kuti vateerere, sezvandakaita nerondedzero META NHASI. Mune yangu kesi, ndakazviita nokukopa uye kunama chinongedzo, asi icho chinogona zvakare kugovaniswa neTwitter, tsamba, WhatsApp, nezvimwe. Kugovera runyorwa tichaita zvinotevera.
Takatamba mu 3 points kurudyi kwechinyorwa. Kana isu tine runyorwa rwakavhurika, isu tinofanirwa kubaya pane iro bhatani bhatani (
Takatamba pa Goverana runyorwa ...
Takasarudza sarudzo kugovana nekutumira.
Maitiro ekurodha pasi mimhanzi yekutamba isinei
Apple Music inotibvumidzawo kurodha mimhanzi kuti titeerere kunze kwenyika, chimwe chinhu pakutanga chaitendwa kuti hachigone asi, nerombo rakanaka, ndizvo. Chokwadi kana iwe watarisa hafu yechinyorwa ichi, iwe unotoziva kuti ungachiwana sei zvakanyanya kana zvishoma. Chaizvoizvo. Izvo zvine chekuita nematatu matatu. Kuti utore mimhanzi kuti uterere paindaneti tichaita zvinotevera.
Tiri kutsvaga chimwe chinhu chinotinakidza.
Takatamba mu matatu mapoinzi izvo zvatinoona kurudyi.
Takatamba pa Inowanikwa online.
Kuti ndipedze, ndinoda kukuudza matipi matatu madiki ayo mazhinji amunofunga kuti anga asisipo.
Nyeredzi nyeredzi dzichiripo. Kuti uite izvi, iwe unongofanira kubata pamusoro pezita rerwiyo uye nemapoinzi mashanu anozoonekwa (· · · · ·)) matinogona kuwedzera nyeredzi.
Album shuffle inowanikwa. Kuti tikwanise kutamba disc zvisina tsarukano tinofanirwa kuvhura disc, kuwedzera mini-player uye ipapo tichaona sarudzo.
Tinogona kuona mazwi enziyo (kana isu takavawedzera kune yavo metadata muTunes) nekungobata chivharo chealbum.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekusvina Apple Music kune yakazara
Zvakanaka, kwemazuva maviri ndasarudza kushandisa iwo matatu emahara ekuyedza emwedzi. Ndinofanira kutaura kuti kunyangwe iine mikana yakawanda, ndainzwa kugadzikana neSpotify, iko kunyorera (kwandiri) kwakanyanya kunzwisisa, zvinoratidza kuti vanga vari pamusika kwenguva yakareba, ndinovimba Apple Music inotora noti uye inovandudza paIOS 2 iyo Music APP sevabeta ve beta vari kutaura mumaforamu. Chokwadi mushure menguva yekutongwa ndinonyorera ne € 3
Mhoro Jordi. Masikati ano ndanga ndichitaura nezvazvo neshamwari pa twitter. Apple Music ichave yakanakisa kana zvese zvaunazvo zvichibva kuApple (kana uine PC ine iTunes) uye unoronga kunyorera. Kana iwe ukashandisa zvimwe zvishandiso, zvakadai seLinux PC, PS3, nezvimwewo kana kana iwe uchida kushandisa sevhisi yemahara, Apple Music iri chaizvo senge inozivikanwa emoji iyo iri brown, yakaumbwa sekatatu uye nemaziso.
Rogelio Razo Stein akadaro
Iwe unofanirwa kuwedzera kusunganidzwa kwenziyo
Pindura Rogelio Razo Stein
Pablooooo, haasi wekuno kana zvakanaka iye ane chikamu ...
Ndedzipi nziyo dzeMetal dzaunokurudzira kana mapoka api (ini ndave kutanga kuiteerera) uye ndinoda maonero ako uye ruzivo
Kwazisai nekutenda Pablo yechinyorwa chino kunyangwe kwandiri ... handitore mukana wacho (ini handiteerere mimhanzi zvakanyanya)
Mhoro Rafael. Pamwe Heavy Metal inoita kunge yakura kwazvo kwauri. Kubva pane Heavy metal une Iron Maiden neManowar, semuenzaniso. Pamwe iwe unofarira powermetal. Unogona kuedza Helloween, Blind Guardian kana Dragonforce kuti uone zvaunofunga. Boka rinosanganisa masitayera mazhinji ndiAmaranthe uye iwo ndemazuva ano, vakaburitsa dambarefu ravo rekutanga muna 2011.
Kana simba resimbi richiita serine usimbe kwauri, saka unogona kuenda Speed ​​Speed, asi ini handizive nzira yekukuudza iwe mapoka anongotamba izvo. Metallica neMegadeth, iyo seyakajairwa mutemo ndeyeTrash Metal, zvakare ine maAlbum eSpeed ​​Metal kupfuura chero chinhu chipi zvacho.
Pablo akakunyorerai ari kuPanama, uye kwandiri chimwe chezvinonetsa zvikuru zvandave nazvo, ndipo pandinopfuura zvinyorwa zvangu zveSpotify, ndinoona kuti dzimwe nziyo kana maalbubhu haawanikwe mudunhu rangu. Uye apo ini pandinoverenga, iwo mimhanzi katarogu akafanana neizvi (nedunhu). Ndakaedza kupa Apple Music mukana uye chokwadi ndechekuti ini ndinoda Spotify. Pamwe imwe nguva.
Thanks Pablo, kwaziso
Ndanga ndiri mushandisi weSpotify kweanopfuura makore maviri. Uye ini ndiri zvakare Mac, iPhone uye PS2 mushandisi. Ini ndinongova nechimwe chikonzero nei NDISINGANAMatire neApple Music, HANDINA iyo account imwechete pane akawanda madhivhisi. NaSpotify premium (€ 4 yekubva kuMovistar +) Ini ndinogona kuisa mushandisi wangu pane akati wandei madivayiri uye kumisikidza Offline Mode sarudzo. Iyi sarudzo inobatsira kwazvo kushandisa account yangu pane yangu iPhone, yemumwe wangu iPhone nePadad, uye yababa vangu Android foni. NaApple Music ini handigone kuita iyi sarudzo, yakakosha kwandiri.
Kana ini ndikawana iyo 3-mwedzi yemahara muedzo uye ini handifarire sevhisi. Kukanzurwa kwemubhadharo kunoitwa sei? Ndatenda pablo.
Pindura kuna Juancho.
Mhoroi, Juancho. Kana iwe uchibhadhara basa, iwe unofanirwa kuchengetedza sevhisi. Ndiri kureva kuti haigone kukanzurwa. Izvo iwe zvaunofanirwa kuita kudzivirira kunyoreswa kubva kuvandudzwa otomatiki. Iwe une chinongedzo chedzidziso mune ino chinyorwa. Paunozvimisa uye zuva richipfuura, hauchazonyorerwi.
Iwe unofanirwa kuita zvarinotaura muchinyorwa chino https://www.actualidadiphone.com/desactiva-la-renovacion-automatica-de-apple-music-y-no-te-lleves-un-susto/
Kubva pazviruva / mimhanzi unogona kudzima raibhurari yeICloud uye unogona kutsvaga nekuteerera nziyo, maalbham uye iyo rese Apple Music katarogu kusvika pazuva randakakuisa ipapo. Kana musi iwoyo wasvika, kunyorera kwako kuchapera uye hauzobhadhariswa.
Nyaya, wedzera 3D zvinhu kumifananidzo yako. Iyo app yevhiki.
Apple inoburitsa iOS 9 beta 5 yevanogadzira uye yeruzhinji beta 3. Isu tinokuudza zvese nhau dzaro.